Osimiri kachasị ogologo na Europe: njirimara, ọnụ na ojiji | Netwọk Mgbasa Ozi
Europe nwere ogologo netwọk nke osimiri ndị nwere nnukwu olu na-enye ndị bi na ya mmiri. Na osimiri kachasị ogologo na Europe O si na Osimiri Volga. Ọ na-agafe n'etiti Russia wee rute ndịda Russia, na-atọgbọ n'Oké Osimiri Caspian. Mpaghara ya bu 1.360.000 km2. A na-ahụta ya osimiri toro ogologo karịa na Europe ma nwee njirimara pụrụ iche.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara osimiri kacha ogologo na Europe yana njirimara ya.
2 Ọnụ nke osimiri kachasị ogologo na Europe
3 Mmetụta gburugburu ebe obibi nke osimiri kachasị ogologo na Europe
4 Nsorouzọ na mmetọ ikuku
Osimiri Volga sitere n’Ugwu Valdai dị n’agbata Moscow na Saint Petersburg ma gbafee n’Osimiri Caspian. Ọ bụghị naanị osimiri kachasị ogologo na Europe, kamakwa osimiri kachasị ukwuu. Ọ dị kilomita 3.690 ogologo ma nwee nkezi nke mita 8.000 cubic kwa sekọnd.
Osimiri mmiri ya metụtara square kilomita 1.350.000, ogo 18 na ụwa. Ọ bụkwa osimiri kachasị na Europe n'ihe gbasara nhapu na mmiri mmiri. A na-ahụta ya dịka osimiri mba Russia. Obodo Russia oge ochie, Russian khanate, bilitere gburugburu Osimiri Volga.
Na akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ụzọ dị mkpa nke mmepeanya Eurasia. Osimiri a na-agafe oke ohia, oke ohia na ala ahịhịa na Russia. Obodo anọ n’ime obodo iri kachasị buo ibu na Russia, tinyere isi obodo Moscow, dị na ndagwurugwu Osimiri Volga. Offọdụ nnukwu ọdọ mmiri n’ụwa dị n’akụkụ Osimiri Volga.
Ọ bụ ala mmiri mechiri emechi nke Oké Osimiri Caspian ma bụrụ osimiri kachasị ogologo nke na-asọba n'ime mmiri ahụ mechiri emechi. Osimiri Volga na-arịgo site na Ugwu Valdai na elu nke 225 mita n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Moscow na ihe dịka 320 kilomita na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Saint Petersburg, na-asọga n’ebe ọwụwa anyanwụ site na Ọdọ Mmiri Strzh, Tver, Dubna, Rybinsk na Yaroslav Russia, Nizhny Novgorod na Kazan. Site n'ebe ahụ ọ tụgharịrị n'ebe ndịda, gafere obodo ole na ole ọzọ wee hapụchaa Osimiri Caspian n'okpuru Astrakhan. 28 mita n'okpuru oke osimiri.
N'ebe kachasị dị mkpa, ọ na-ehulata Don. N’akụkụ elu nke Osimiri Volga nke dịdebere Staritsa, Osimiri Volga na 1912 nwere ọtụtụ iyi, nke kachasị mkpa bụ Osimiri Kama, Osimiri Oka, Osimiri Vetluga, na Osimiri Sura. Volga na ndi ozo di iche iche bu uzo Volga, nke na agafe ebe ihe ruru 1.350.000 square kilomita na mpaghara Russia ndi mmadu juru.
Ọnụ nke osimiri kachasị ogologo na Europe
Buru n'uche na osimiri kachasị ogologo na Europe ga-enwerịrị ọnụ. Ọnụ ya dị ogologo nke ihe dị ka kilomita 160 ma gụnye ọwa mmiri 500 na obere osimiri. Osimiri kasị ukwuu na Europe bụ naanị ebe Russia ebe ị nwere ike ịchọta anụmanụ dịka flamingos, pelicans na lotus. N'ihi oke oyi dị na mpaghara Russia a, ọ na-ajụkarị oyi maka ọtụtụ ogologo ogologo mmiri dum maka ọnwa 3 n'afọ. The oyi ọnwa ndị fọdụrụ n'ezinụlọ osimiri na Europe na-kpam kpam oyi.
Osimiri Volga na-ekpochapụ ọtụtụ ebe ọdịda anyanwụ Russia. Ọtụtụ n'ime nnukwu ọdọ mmiri ya na-enye mmiri mmiri na ike hydroelectric. A na-eji ogologo osimiri a mee ka ọgbọ nke ume ọhụrụ dị elu maka mmụba nke hydraulic nke nwere ike wuru n'akụkụ osimiri kachasị ogologo na Europe. Osimiri Moscow, Osimiri Volga-Don, na ụzọ mmiri Volga-Baltic na-eme ka mmiri dị n'ime mmiri jikọta Moscow na Oké Osimiri White, Oké Osimiri Baltic, Oké Osimiri Caspian, Oké Osimiri Azov, na Oké Osimiri Ojii.
Mmetụta gburugburu ebe obibi nke osimiri kachasị ogologo na Europe
Oke mmetọ kemịkal emetọla Osimiri Volga na ebe obibi ya. Ihe umu mmadu na umu anumanu na-emetuta site na ihe mmadu n’emeghari n’iile. Site na ọganihu nke teknụzụ na oge mmepụta ihe, enwere ọtụtụ ịhapụ mmiri na-emerụ mmiri ma na-eme ka ihe ndị dị ndụ na ebe obibi nke ọtụtụ ụdị ahịhịa na ụmụ anụmanụ nwee mmetụta na-adịghị mma.
Ndagwurugwu mmiri nwere nnukwu ọmụmụ ma mepụta ọtụtụ ọka wit. O nwekwara akụ na ụba dị n’ime ya. Otu nnukwu ulo oru mmanu di na Volga River. Akụ ndị ọzọ gụnyere gas, nnu, na fatịlaịza potash. Volga Delta na Oké Osimiri Caspian bụ ebe ịkụ azụ. Astrakhan, nke di na Delta, bu etiti ulo oru caviar.
Ihe ozo banyere gburugburu osimiri kacha ogologo na Europe bu na a na-ejikarị ya eme ihe. N'ihi owuwu nke nnukwu dams n'ime afọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Osimiri Volga agbatịkwuola nnọọ. Ọ dị oke mkpa maka njem na njem ụgbọ mmiri na Russia ebe ọ bụ na akwadebela mmiri niile dị na osimiri ahụ maka mkpọchi nke ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri nwere nnukwu akụkụ. Bogbọ mmiri ndị a niile nwere ike isi n’Oké Osimiri Caspi na-agaru nso na nsọtụ osimiri ahụ na mpaghara kacha elu.
Nsorouzọ na mmetọ ikuku
Mmetọ nke osimiri kachasị ogologo na Europe ọ toro naanị kemgbe oge ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Achọpụtara na na 2016, ikike itinye ikike na mmanụ ala ya na mmiri mmiri bara ụba ma e jiri ya tụnyere otu nyocha emere na 2015. Iji mee ka ihe ka njọ, nchikọta nke mmetọ na 2016 gara n'ihu na-abawanye n'ime afọ.
Ngwaahịa nwere oke mmetọ a hụrụ gụnyere iron, mercury, na nickel. Na mbido August nke afọ ahụ, Prime Minista Russia Medvedev nyere iwu dị mkpa iji mejuputa atụmatụ mkpocha Osimiri Volga ozugbo. Dika ozi ndi Russian Nature Nature siri nye, mmejuputa nke Atụmatụ mkpocha Volga ga-efu ihe dịka ijeri 34,4, ma ọ bụ ihe dị ka ijeri US $ 580.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere osimiri kachasị ogologo na Europe na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Osimiri kachasị ogologo na Europe